ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှားသွားသလား” (လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်)
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှားသွားသလား” (လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်)
စနေညတိုင်း တင်ဆက်တဲ့ ဘီဘီစီ “လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်” တိုက်ရိုက်ရေဒီယိုဆွေးနွေးခန်းမှာ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ဒေသခံတွေနဲ့ ဘီဘီစီ ပရိသတ်/သောတရှင်တွေ အခြေအတင် အကျေအလည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း ဆွေးနွေးထားတာတွေကို နားဆင်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုချို တင်ဆက်ထားပါတယ်။
စစ်အုပ်စုမှာတိကျတဲ့Game Plan အသေအချာရှိတယ်
Everyone thinks if you are good leader, you are smarter than anybody that's why they believe and rely on you.
If you are not reliable , what more can we say?
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့ တပည့်တော်တို့ ပြည်သူပြည်သားများလည်း အမေစုကို လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်ဘုရား ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲစေချင်သောလူတွေ။ပြည်တွင်းပြည်ပ မလိုမုန်းတီးသူတွေအတွက် ထားခဲ့ပါမယ့်ဘုရား။သူတို့ က ဦးသန်းရွေလို လက်နက်နဲ့ တည့်တည့်ပြစ်မှ ကြိုက်ကြတဲ့ လူတွေမို့ ပါဘုရား...(ကိုထွန်းဝေ)ဖော့ဘုတ်မှ
ဒီ လို အ ကွက် ဆင် ထား မှန်း သိ ရဲ့ သား နဲ့ အာ မ ခံ တာ လေ ပြည် သူ က လည်း
ဒီ အဖြေ ထွက် မယ် ဆို တာ သိ ပြီး သား ပဲ ။ဒေါ် စု မလုပ် လည်း ဒီ အ ဖြေ ပဲထွက်
မယ် ဆို တာ သိ ပြီး သား ပါ။ ဒါ ပေ မဲ့ လူ ထု အား နဲ့ ကယ် ထုတ် ထား တဲ့ဒို့ ခေါင်း
ဆောင် ဒို့ အလှည့် တော့ နည်း နည်း ကူ ညီနိုင် လေ မလားလို့ တော့ မျှော်လင့် မိ ကြ
တယ်။မိုး ထဲ ရေ ထဲ ရောက် တော့ ရွှေ ပြည် အေး တရား ဟော နေတော့တာပဲ ။
အပြစ် ကို အပြစ် အတိုင်း အ ရေး ယူ စေ ပြီး အိမ်နီး ချင်း နိုင် ငံ ဖြစ် သည့် အ တွက်
အစိုးရ ကုမ္ပ ဏီ ပြည် သူ လူ ထုတို့ ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွက် ခိုင်း ရင် ကို အ မေ စု
ကို ပိုပိုချစ် ကြ အုံး မှာ ။ အပြစ်ကို အပြစ် လို ဥပ ဒေ အ တိုင်း အ ရေး ယူ အ လုပ်
ကို ဥ ပ ဒေ ဘောင် အ တွင်း က ပြည် သူ နှင့် ညှို နှိုင်း ဆောင် ရွက် နိုင်ပါ သည် လို့
ထုတ် ပြန် လိုက် ရင် ဘယ် လောက် ကောင်းမ လဲ ဟု စိတ် ကူး ယဉ် မိ ပါ သည်။